TORBANOOTA SOOMII GUDDAA – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
TORBANOOTA SOOMII GUDDAA
March 3, 2015 /in Barumsa Amantaa /by EOTC Afaan Oromo
Torbanooni Soomii guddaa bakka sadeetitti qoodamu.Torban hundaaf manni kiristaanaa keenya maqaa moggaasteerti.
Torban Tokkoffaa:- “Zawerede” jedhama.Torban kana kessatti Ilmi Waaqayyoo Iyasuus Kirstoos akka Nama ta’ee addunyaa kana fayyise, Waaqayyo jalala namaatii jedhee akka ilma Isaa tokkicha gara addunynaa kanaatti akka erge, Ilma Isaatti kan amane immoo bara baraaf akka jiraachuu danda’u, kan Ilma Isaatti hin amanne immoo akka itti murtaa’u torban kana kessatti kan barsiisamudha. Wangeellii torban kana keessatti dubatammu immoo;Yohannis 3:10-20 dha.
Torban Lamaffaa:- “Qiddist” jedhama. Torban kana kessatti Waqayyo keenya cubbuu keenya irraa nu qulqulleesuf akka nama ta’e; nutis qulqullina Isa irraa arganne fiixaan basuuf akka soomuu qabnu, akka kadhachuu qabnuu, akka kennaa adda addaa hiyyeesaf lachuu qabnu, kan itti ibsamu yemmu ta’u; kadhanii fi kennaan keeyna akkasumas, soomiin keeyna akka seeraan ta’u kan bal’inaan itti ibsamudha.Torban kana keessatti wangeelli dubbifamu; Mat 6:16 dha.
Torban Sadaffaa:- “Mikuraab” jedhama. Mikuraab jechuun bakka Yihudoonni kitaaba itti dubisani, kadhaa itti godhanii fi aarsaa itti raawwatanidha. Garuu isaan seera kana hunda jigsuudhan yemmu faasikaa isaanii Horii fi makodii( gugee) qalmaa, akkasumas, maallaqa itti geeddaru ture. Goftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waan kana argee obsuuf hin dandeenye “Mana Abbaa Kootii bakkee bittaa fi gurguuraa hin godhinaa” jedhee moraa kessaa isaan ari’eera.
Har’as mana kana keessatti waan Waaqayyo hin eeyyamne raawwachuun ni adabsiisa. Mana jechuun mana kiristaanaa itti sagadnu qofa osoo hin taane qaamni keeynas waan mana quluqullummaa Waaqayyoo ta’uu qabuuf hundi keeyna namummaa keenya keessattii waan Waaqayyo gammachiisuu danda’u yaduu fi hojjachuun nurraa eegama jechuudha. Garuu kana gochuu baannaan akka qulqqullu Phaawloos dubbate mana Waaqayyoo diioguu keenyaan akka itti gaafatamnu nu hubachiisa. ( 1Qor 3:16)
Torban Afraffaa:- “Matsaaguu” jedhama. Matsaaguu jechuun dhukubsaataa jechuudha. Seenan isaas waggoota 38f bakkee cuphaa Beeta saayidaa jedhamtuutti fayyina argachuuf siree isaa irratti maxanee kan jiraachaa turedha. Bakkee cuphaa kana irratti namootiin fayyan namoota fira qaban ykn namoota human qaban yemmu ta’u, wanta inni firaaf humna hin qabneef yemmu ergamaan Waaqayyoo bishaan sana warraaqsu (sochoosu) namni isa bishaan kessa isa cuuphu wanta hin jirreef Waggoota kanaaf rakachaa ture.
Garuu firaaf humna dhabee haa jiraatu malee booddee irratti Gooftaan Keenya Iyyasuus Kiristoos itti dhiyaatee “Fayyuu Ni feetaa” jedheen dhukubsataan sunis ani nama nagargaaru hin qabu; yemmu ergamaan Waaqayyoo bishaan waraqsu namni bishaan kana keessa na buusu waan hin jirreef namootiin humnaaf fira qaban na dursu jedheen.
Yemmuu kana Gooftaan keenya Iyyasuus kiristoos “Ka’iitii siree kee baadhuu deemi” jedheen. Matsaaguunis fayyaa isaa argtee siree isaa baate deemuuf danda’eerra. Kana kan godhe Gofta Keenya Iyyyasuus kiristoosi. Maqaan Isaa bara baraaf kan galatoome yaata’u.
Har’as namoonni adda addaa nama isaan gargaaru dhabuudhan rakina adda addaatiin fayyaa isaanii dhabaa jiru. Nama afuutaa ta’uu jechuun ykn kirstaanummaan nama nama dhabeef nama ta’udha. Nama rakkachaa jiruuf qaqabuudha, kan nuti Gooftaa keenya irraa barannus kanadha. Torban kana kessatti Wangeelli dubbisamu Yohannis 5:1-24.
Galanni Waaqayyoof haa ta’u, Ameen!
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2015-03-03 05:40:522018-10-26 09:21:21TORBANOOTA SOOMII GUDDAA
Taabonni Hatame dinqii Hojjechuudhaan gara teessoo Isaatti kabajaan ... Gadaamii Waggoota dhibba toorbaan dura hundeeffame- Gadaamii cuqqaalaa ( Zi...